गोलभेँडाका ११ गुण - सफलताका सुत्रहरु
Home/स्वास्थ्य टिप्स/गोलभेँडाका ११ गुण
कपाल र छाला चम्काउँछ
घामबाट आउने विकिरण, प्रदूषण आदिका कारण कपाल झर्ने, पातलो हुने, फुस्रो हुने र टुक्रिनेलगायत समस्या आउँछन् । साथै, छाला सुखा, रुखो र फुस्रो हुने गर्छ । गोलभेँडा खाँदा यसमा पाइने लाइकोपेन नामक तत्वले कपाल र छालालाई चम्किलो बनाइराख्छ । साथै, गोलभेँडा अनुहारमा दल्नाले यसले फेसियल क्लिन्जरको काम राम्रोसँग गर्छ ।
गोलभेँडामा पाइने लाइकोपेन नामक तत्वले शरीरमा क्यान्सरका कोषको विकास र विस्तार हुने क्रम कम हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेका छन् । खासगरी गोलभेँडा खानाले प्रोस्टेट र आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई कम गर्छ । गोलभेँडा जति पकायो, यसमा रहेको लाइकोपेनको मात्रा उति बढ्ने भएकाले गोलभेँडा फत्काएर अचार खाने गरिरहनुपर्छ ।
हड्डी बलियो पार्छ
गोलभेँडामा भिटामिन–के र क्याल्सियम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ ।
चुरोटको हानि कम गर्छ
चुरोट पिउने अथवा चुरोट पिउनेसँग निकटको सम्बन्ध हुने व्यक्तिको फोक्सोलगायत अंगमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यसलाई गोलभेँडामा पाइने काउमरिक एसिड र क्लोरोजेनिक एसिडले कम गरिदिन्छन् ।
रगत शुद्ध बनाउँछ
गोलभेँडामा भिटामिन–ए र भिटामिन–सीजस्ता एन्टी–अक्सिडेन्ट तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले रगतलाई शुद्ध बनाउँछ । गोलभेँडाको सलाद खायो भने शरीरमा भिटामिन–सीको आपूर्ति बढी हुन्छ ।
मुटुु बलियो बनाउँछ
गोलभेँडामा पाइने भिटामिन–ए, भिटामिन–बी, पोटासिमजस्ता तत्वले मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने जोखिम घटाउनुका साथै रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नसमेत दिँदैन ।
सुगर नियन्त्रण गर्छ
गोलभेँडामा क्रोमियम नामक तत्व पाइन्छ, जसले रगतमा सुगरको मात्रा बढ्नबाट जोगाउँछ । त्यही भएर डायबेटिजका रोगीले गोलभेँडा सकेसम्म बढी खाने गर्नुपर्छ ।
पाचनक्रिया बलियो बनाउँछ
गोलभेँडा खाने गर्नाले कब्जियत निको हुने र पाचन क्रिया बलियो हुने गर्छ । खाना खाइसकेपछि अन्त्यमा पाकेको एउटा गोलभेँडा खाने गर्नु राम्रो हुन्छ ।
गोलभेँडामा पाइने भिटामिन–ए र खनिजले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछन् ।
गोलभेँडामा भिटामिन–सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरमा रहेको स्ट्रेस हार्मोन कम गरी व्यक्तिलाई तनावरहित बनाउन मद्दत गर्छ ।
बोसो कम गर्छ
गोलभेँडा खाने गर्नाले शरीरमा कार्निटाइन नामक एमिनो एसिडको मात्रा बढ्छ र यसले शरीरमा रहेको अनावश्यक बोसो काट्ने गर्छ ।
भातको माडका लाभ
हामीले पकाउने भात आधा पाकिसकेपछि तयार हुने बाक्लो तरल पदार्थलाई भातको माड भनिन्छ । कान्जी समेत भनिने यो भातपानी स्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै हितकर छ । छालाको समस्यादेखि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य समस्याको समाधानका लागि भातको माड प्रभावकारी मानिन्छ । यसका फाइदा यस प्रकार छन् ।
भातको माडलाई अनुहारमा लेपन लगाउँदा अनुहार सफा र चम्किलो हुन्छ । यसमा सफा गर्ने विशेष तत्व हुने भएकाले फेस वास वा टोनरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको नियमित प्रयोगले छाला कसिलो र जवान मानिसको जस्तै कलिलो र चम्किलो बनाउँछ ।
भाइरल संक्रमणका बेला वान्ता आउने तथा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुने गर्छ । भातको माडले डिहाइड्रेसनबाट मात्र जोगाउँदैन, ज्वरो आउँदा गुमाएको आवश्यक पोषण तत्वको पूर्ति गरिदिन्छ।
बालबालिकामा पखाला रोक्न भातको पानी निकै प्रभावकारी औषधि हो । यो पानीले बालबालिकाको पेट गडबडी हुने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरी आनन्द प्रदान गर्छ । पखाला लाग्दा शरीरबाट अत्यधिक पानी जाने भएकाले भातको पानीले पूर्ति गरिदिन्छ ।
भातको पानीले कपालमा चमक ल्याउनुका साथै कपाल उम्रन सहयोग गर्छ । गर्मी मौसममा भातको पानीलाई शिरमा दल्दा टाउकोमा शीतल अनुभूति हुन्छ र यसले कपाललाई पनि छिटो छिटो वृद्धि गराउँछ । स्याम्पु दलेपछि कपालमा कन्डिसनर मसाज गरेजस्तै गरी भातको पानी प्रयोग गर्नुहोस् र केही मिनेटपछि चिसो पानीले सफा गर्नुहोस्, कपाल मुलायम र चम्किलो हुन्छ ।
भातको पानीमा एउटा स्वाभाविक चिस्याउने तत्व हुन्छ । यो सूर्यको प्रकाशले डढेको छालालाई चिस्याउन र जलन रोक्न भातको पानी प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । मलमलको कपडामा केही अधकल्चो पाकेको चामल खन्याउनुहोस् र आधा घन्टा नुहाउने पानीमा राख्नुहोस् । भातको पानीले नुहाएर स्वच्छ र फुर्तिलो हुनुहोस् ।
दादुरा र बिमिरा निको पार्छ
भातको माडमा हुने कार्बोहाइड्रेडले दादुरा र शरीरमा आउने बिमिरा र घाउ निको पार्न सहयोग पु¥याउँछ । चिस्याएको भातको माडमा एउटा कटनको टुक्रा भिजाएर लगाउँदा शरीरका बिमिरा र दादुरालाई निको पार्छ । आगोले पोलेको छालामा चिस्याएको भातको माडले पनि शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ ।
मेरो भिनाजु संगको पहिलो मेरो एक रात यसरी बित्यो
१३ पुष २०७४, बिहीबार ०८:५७
१३ भाद्र २०७४, मंगलवार २०:५२
१० पुष २०७४, सोमबार २२:१०
११ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:३७
यस्ता पाँच किसिमका मान्छेहरुले लसुनको सेवन गर्नु हुँदैन
९ पुष २०७४, आईतवार ०९:११
सोप किन खाने ? यस्तो छ फाइदा
१२ माघ २०७४, शुक्रबार २०:५५
एउटा बाख्रा जस्ले अाफु मर्दा संसार रूवायाे : अाखिर के थ्याे त्यस्ताे त्याे बाख्राेमा ?
५ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:०१
यी ४ व्यक्तिलाई आफ्नो घरबाट कहिले खाली हात नफर्काउनुहोस्
१५ कार्तिक २०७४, बुधबार १०:२१
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ भाद्र १२ गते मङ्गलबार
११ भाद्र २०७५, सोमबार २३:४०
१६ संकलित “रोचक” भनाइहरु
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:२७